के गर्दैछन् दरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी अधिराजकुमारी श्रुतीका छोरीहरू? – Todays Nepal
के गर्दैछन् दरबार हत्याकाण्डमा मारिएकी अधिराजकुमारी श्रुतीका छोरीहरू?
गीत बदलियो, रीत बदलियो । विगत परिमार्जित भएर वर्तमान फरक देखियो । सबै कुरा परिवर्तन नै थियो । हिजोको मामाघर आजको संग्राहलय बन्यो । तर, मन बदलिएन । देश र आमा उस्तै हुन् । जति आमाको माया हुन्छ, त्यति देशको माया हुन्छ । त्यसैले होला स्व। अधिराजकुमारी श्रुति शाह राणाका छोरीहरू बारम्बार सम्झिरहन्छन् आमा र देश ।
थप जानकारीको लागि हेर्नुहोस् भिडियो :
छोराको सम्झनामा आमाको आँखाबाट बररर आँखु
कतार सरकारले फेसबुकमा कमेन्ट गरेको भरमै नेपालीलाई देश निकाला !